Iyo nyowani vhezheni yeOpenSilver 1.0, iyo yakavhurwa sosi reimplementation yeSilverlight, yatoburitswa kare | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeOpenSilver 1.0, iyo yakavhurwa sosi reimplementation yeSilverlight, yakatoburitswa
Mushure mechingopfuura gore nehafu yekuratidzwa kweiyo OpenSilver chirongwa, kuburitswa kweshanduro yekutanga yakagadzikana kwakaziviswa, mune iro chirongwa icho cheyakavhurwa sosi yekumisikidza yeSilverlight chikuva, izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire inoenderana webhu kunyorera uchishandisa C #, XAML uye .NET matekinoroji.
Rangarira izvozvo Microsoft yakamisa kusimudzira kwekushanda kweSilverlight muna2011, uye muna Gumiguru 12, 2021, kugadzirisa kwepuratifomu kuchamiswa zvachose. Sezvazviri neAdobe Flash, kuvhenekerwa kweSilverlight kunoderedzwa mukufarira kushandiswa kweyakajairika Webhu-yakavakirwa matekinoroji. Anenge makore gumi apfuura, yakavhurwa sosi yekuitwa kweSilverlight, Mwenje wemwedzi waive uchitogadzirwa pachishandiswa Mono, asi kuvandudzwa kwayo kwakamiswa nekuda kwekushaikwa kwevashandisi kudiwa kwetekinoroji.
Iyo OpenSilver chirongwa chiri kuyedza kumutsiridza Silverlight tekinoroji yekuwedzera hupenyu hweSilverlight application iripo, seMicrosoft inopera kutsigira chikuva uye browser rutsigiro rwekuwedzera-ons. Nekudaro, .NET uye C # vatsigiri vanogona zvakare kushandisa OpenSilver kugadzira zvirongwa zvitsva. Zvekuvandudza kunyorera uye kutama kubva kuSilverlight API kuenda kune yakaenzana OpenSilver mafoni, zvinokurudzirwa kushandisa plugin yakanyatsogadzirirwa iyo Visual Studio nharaunda.
OpenSilver yakavakirwa paMono yakavhurwa sosi kodhi (mono-wasm) uye Microsoft Blazor (chikamu cheASP.NET Core), uye nekuitwa kwayo mubrowser inounganidza kunyorera muWebAssembly middleware.
Zvishandiso zveOverSilver zvinoenderana ne mabhurawuza ese anotsigira WebAssembly, iyo inosanganisira makuru mabhurawuza (Edge, Chrome, Firefox, Safari ...), pane ese makuru mapuratifomu (Windows, macOS, iOS, Android, Linux, ChromeOS), pasina vashandisi vanofanirwa kuisa plugin, maererano neUswareware.
Sezvazviri, OpenSilver 1.0 inotsigira zvizere kugona kukuru kweinjini yeSilverlight, kusanganisira rutsigiro ruzere rweC # neXAML, pamwe nekumisikidzwa kwemapuratifomu maAPI akakwana kushandisa raibhurari yeC # seTelerik UI, WCF RIA Servicios, PRISM uye MEF .
Iyo kodhi yeprojekiti yakanyorwa muC # uye inogoverwa pasi peMIT rezinesi. Silverlight yakarongedzwa kunyorera inogona kumhanyisa mune chero WebAssembly-inogoneswa desktop uye nharembozha, asi kunongedzera kwakananga parizvino kunogoneka chete paWindows uchishandisa Visual Studio.
OpenSilver inoparadzirwa seNuGet package (paNuGet.org) uye seVSIX yekuwedzera yeVisual Studio 2019 (kana yepamusoro) iyo ine mapurojekiti ezvirongwa.
Kugadzira chirongwa chitsva cheOpenSilver, zvinokurudzirwa kutora matemplate eprojekti kutanga. Kuti vaite kudaro, ivo vanofanirwa kuenda kune yepamutemo OpenSilver webhusaiti uye tinya Dhawunirodha, pinda muakaundi yavo yeMicrosoft uye utore iyo OpenSilver.VSIX faira. Uku kuwedzerwa kweVisual Studio kuchaisa matemplate emapurojekiti uye zvimwe zvinhu senge XAML mupepeti.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo uye zvimwe nezve chirongwa Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani vhezheni yeOpenSilver 1.0, iyo yakavhurwa sosi reimplementation yeSilverlight, yakatoburitswa
Inoda kuziva kuvandudza kweiyi tekinoroji, nekuti panguva iyo Silverlight haina kuwana kubudirira kweflash uye vashoma kwazvo vaishandisa
Kunyangwe ikashanda kuenderera uchishandisa flash, gamuchira
Flatpak 1.12 inovandudza sub-sandbox manejimendi kuti ibatsire Steam
helloSystem 0.6: iyo nyowani vhezheni yeFreeBSD-based based operating system